Inyama yehagu yaseTshayina kunye neHam iLungile kwaye isempilweni kunye neFactory | HUIQUAN
Ingulube ikhethwa, umxholo wenyama uphezulu, kwaye inyama enqabileyo ithambile kwaye ibonakala
Ukukhetha okugqibeleleyo kwezixhobo, ubukhulu becala isiqwenga somlenze wehagu obhityileyo, amanqatha angqongqo ukuya kumlinganiselo obhityileyo, inyama ibonakala ngokucacileyo, indawo yokungena izele yinyama, ithambile kodwa ayinamafutha.
Ababoneleli abakhethwe ngokungqongqo banalo lonke ikhonkco loshishino lwehagu, ukusuka ekufuyweni kwezityalo, imveliso yokutya ukuya ekufuyweni, ukuxhelwa kunye nokulungiswa, ukugquma ikhonkco ngalinye ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokulandeleka komgangatho wehagu.
Ubume bokukhula obuphezulu, utyalo-mali kwizixhobo zonyango lwebhayoloji ezingenavumba, ukwakha umzi-mveliso ongenavumba
Iindlela zenzululwazi zokuzalanisa, ukulinywa kwezityalo ngokuzimeleyo, ukondla ngokwenzululwazi kunye nokuchanekileyo
Ukhetho olungqongqo lwemathiriyeli, ukuhlolwa okungqongqo kunye nokwamkelwa kwezinto eziluhlaza, kunye nokuvalelwa yedwa ngokuthobela imithetho nemimiselo.
Umgca wokuvelisa osemgangathweni, izixhobo zokusebenza zanamhlanje zokuqinisekisa umgangatho ofanayo weemveliso ezigqityiweyo
Amava: Kwishishini lokutya okunkonkxiweyo, sineminyaka engaphezu kwe-13 yamava aqeqeshiweyo, kwaye sivelisa iintlobo ngeentlobo zeemveliso, ezibandakanya: isityu, inyama yesidlo sasemini, ipudding yerayisi, amakhowa, njl. ukuveliswa kokutya okunkonkxiweyo, kunye nokuqonda iteknoloji yokuvelisa iintlobo zokutya okusemathinini.
Iqela: Sinemveliso yobungcali, ukusebenza, kunye neqela lokuthengisa. Umqolo weqela uneminyaka engaphezu kwe-10 yamava oshishino.
Impembelelo yehlabathi: Iimveliso zethu zithengiswa ngokubanzi, kunye nabathengi abavela kumazwe amaninzi nakwimimandla, njengale: uSolomon, Philippines, Mauritius, Papua New Guinea, Malaysia, India, njl.
Izinto eziluncedo:Singabonelela ngebrand yethu kunye neemveliso zebrand yakho ngaxeshanye. Ixhasa ukusetyenzwa okulungiselelweyo kweemveliso zophawu kwaye inokubonelela phantse zonke iintlobo zeemveliso ezifunekayo. Xa kuthelekiswa nabaninzi abakhuphisana nabo, umgangatho wethu wemveliso ugqwesileyo kwaye unikezelo luzinzile kakhulu.
Buza: Athini amaxabiso akho?
Impendulo: Amaxabiso ethu axhomekeke ekutshintsheni ngokuxhomekeke kubonelelo kunye nezinye izinto zentengiso. Siza kukuthumelela uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva kokuba inkampani yakho iqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe vetshe.
Buza:Unayo iodolo encinci yobungakanani?
Impendulo:Ewe, sifuna ukuba zonke iiodolo zamazwe ngamazwe zibenomlinganiselo oqhubekayo wokuodola. Ukuba ujonge ukuthengisa kwakhona kodwa ngexabiso elincinci kakhulu, sicebisa ukuba ujonge iwebhusayithi yethu
Ngaphambili: Inyama yehagu enkonkxiweyo enkonkxiweyo yoKutya okuGcina ixesha elide
Okulandelayo: Inyama yehagu eqhotsiweyo egciniweyo
Iinyama ezinkonkxiweyo zokusinda, Inkukhu enkonkxiweyo, Idada Eliqhotsiweyo elinkonkxiweyo, Inyama yehagu yesidlo sasemini, I-Canning Beef Brisket, Inyama yehagu enkonkxiweyo,